श्रीदेव बीएल्को नेतृत्वमा ‘नेशनल डेल्फिक काउन्सिल’ स्थापना - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
जर्मनीको बर्लिनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय डेल्फिक काउन्सिल’को हेडक्वाटर रहेको छ । यसका संस्थापक तथा सेक्रेटरी जनरल क्रिष्टियन बि. कर्ष हुन् । कर्षले नेपाल च्याप्टरलाई बधाई र सफलताको भिडियो सन्देश पठाएका थिए । कार्यक्रममा प्रस्तुत सन्देशमा उनले सोह्र सय बर्षदेखि शुन्य अवस्थामा रहेको डेल्फिक काउन्सिललाई तीस बर्ष अगाडी पुनस् सुचारु गरेको तथा तीस बर्षमा नेपालसम्म आईपुगेकोमा खुशी व्यक्त गरे । प्राचिन समयमा ग्रीसबाट ओलम्पिक सँगै शुरु भएको डेल्फिक बिभिन्न कारणले बन्द भएको थियो । प्राचिन ग्रीसका शासकहरुद्वारा यि दुवैमाथी रोक लगाईएको थियो । ओलम्पिक सन् १८९४ मा पुनस् शुरु भयो भने डेल्फिक त्यसको एक सयबर्ष पछि सन् १९९४ मा पुनस् सुचारु भएको थियो । प्राचिन ग्रीसको डेल्फी भनिने स्थानबाट डेल्फिक शुरु भएको मानिन्छ ।